Kedu ihe bụ Schutzhund na gịnị kpatara ya ji dị mma maka nkịta gị? - Ọzụzụ Nkịta
Kedu ihe bụ Schutzhund na gịnị kpatara ya ji dị mma maka nkịta gị?
Schutzhund bụ okwu German nke pụtara “Nkịta nchebe” ma na-ezo aka n'egwuregwu nkịta nke na-elekwasị anya na nrubeisi nkịta, nsuso, na nchedo nkịta.
A makwaara dị ka IGP, na IPO tupu nke ahụ, Schutzhund bụ egwuregwu na-asọ asọmpi nke na-enyocha otu nkịta nwere ike isi tozuo oke nkịta.
Ya mere, ka anyị lebakwuo anya Ọzụzụ Schutzhund , ihe ọ gụnyere, na ụfọdụ iwu ya ndị bụ isi.
Ogologo oge ochie nke ọzụzụ Schutzhund
Dị iche iche aha Schutzhund na ihe ha chọrọ
Ihe niile banyere usoro atọ nke Schutzhund
Ndị nkịta a zụrụ azụ Schutzhund - gịnị ka ha nwere ike ịme?
Otu esi amalite na Schutzhund?
Ntuziaka nkuzi Schutzhund - ndụmọdụ ole na ole dị mkpa
Echiche ndị na-ezighi ezi banyere Schutzhund
Ekwesịrị m ịmalite ọzụzụ Schutzhund?
Emepụtara Schutzhund na mbido narị afọ nke 20 na Germany, ebe e jiri ya mee ihe nyocha kwesịrị ekwesị maka ndị ọzụzụ atụrụ German .
German ndị ọzụzụ atụrụ na-azụ atụrụ ka ga-enwerịrị utu aha Schutzhund ma nweta nyocha agbụrụ, akwụkwọ ntachi obi, akara nkwenye, na ụzarị ọkụ tupu e nwee ike ịzụ ha na Germany.
Mgbe obere oge gachara, ọzụzụ Schutzhund mepere emepe ndị ọzọ na-echebe ụdị German , dị ka Ndị Doberman , Ndị ọkpọ , Ndị na-eme mkpọtụ , na Reisenschnauzers (Giant Schnauzers) .
Taa, egwuregwu a na-emeghere ụdị anụ ọhịa niile ma dị n'akụkụ ụwa niile. Agbanyeghị, ọ bụ ihe ama ama na mba Europe ndị ọzọ, Australia, Canada, na USA.
Ọtụtụ Klọb Schutzhund na-arụ ọrụ na United States , gụnyere:
United Schutzhund Clubs nke America (USCA)
American Dog Association (AWDA)
American Dog Federation (AWDF)
Klọb ndị a niile gbara gburugburu Schutzhund na egwuregwu nchedo yiri nke ahụ. Dịka anyị kwurula, Schutzhund bụ asọmpi a maara dị ka IGP, mana amaara ya dịka IPO tupu nke ahụ.
Nke ahụ pụtara na IGP bụ nsụgharị emelitere nke IPO, nke abụọ bụ otu ihe ahụ dị ka ọzụzụ Schutzhund.
Egwuregwu ọzọ dị ka Schutzhund bụ American Schutzhund . Ọ bụ ụdị egwuregwu kachasị ọhụrụ na obere, ma ọ bụrụ na ọ bụla, ọdịiche.
Egwuregwu Schutzhund na mba ụwa na-achịkwa ma na-achịkwa ya Federation Cynologique Internationale (FCI) kemgbe 2004, mgbe ụlọ ọrụ German abụọ akpọrọ Verein für Deutsche Schäferhunde (SV) na Deutscher Hundesportverein (DHV) hapụrụ njikwa ahụ.
FCI setịpụrụ ụkpụrụ nkịta nchebe na iwu maka ule Schutzhund .
Ọ bụ ezie na ụdị nkịta niile nwere ike ịsọ mpi na mmemme FCI, ụdị nchedo dị ka German Shepherds, Rottweilers, na Onye Belgium Malinois ’Ka na-achịkwa egwuregwu ahụ.
Schutzhund na-enye ọtụtụ nkịta nkịta na ndị nwe nkịta. Ọ bụ nnukwu nkịta ahụ, uche, na mmekọrịta mmadụ na ibe. Egwuregwu ahụ na-ejekwa ozi dị ka ngwa ahịa ozuzu bara uru, na-eme ka ụdị ọmụmụ ahụ dị elu.
Klọb Schutzhund na-enye ndị nwe na ndị nkịta ọzụzụ ohere ịbụ akụkụ nke otu ndị mmadụ na-ekerịta otu ihe.
Isi ihe onyonyo
A na-enye ndị nkịta na-abanye ọnwụnwa Schutzhund aha maka ịgafe usoro ọzụzụ atọ (nsuso, nrube isi, nchebe).
Agbanyeghị, tupu nkịta enwee ike inweta aha Schutzhund, ọ ga-ebu ụzọ gafee ule ọnọdụ mmụọ ma nweta akara ugo BH. Ule a na-enyocha ọnọdụ nkịta na omume ya gburugburu ndị mmadụ.
Nyocha BH gụnyere nrube isi, dị ka ikiri na nkwụsị, mgbada, ịnọdụ ala, na ncheta, yana mmeghachi omume ya na mkpọtụ dị iche iche, ìgwè mmadụ, ụgbọ ala, na nkịta ndị ọzọ.
Ozugbo nkịta nwetara akara BH, ọ nwere ike ịbanye ọnwụnwa Schutzhund wee nweta utu aha. E nwere isi aha Schutzhund atọ ọdịda nkịta na ndị na-elekọta ha:
SchH1 (Akụkọ) - Nke a bụ ihe kachasị dị na ọkwa atọ ahụ, ọ dịkwa ka IPO1 na IGP1. Iji nweta aha a, nkịta kwesịrị ịdịkarịa ala ọnwa 18. Ọ kwesịrị ịgafe nnwale nrube isi, nsochi na nchedo.
SchH2 (etiti) - Otu dị ka IPO2 na IGP2, a na-enye nkịta aha a maka nkịta ndị dịkarịa ala ọnwa 19 ma nwee ogo SchH1. Usoro ato a siri ike ma chọọ ntachi obi nkịtị, njikwa, na ahụ ike.
SchH3 (Nke di elu) - Nke a bụ ogo mmụta nke Schutzhund, nke dị ka IPO3 na IGP3. Nkịta kwesịrị ịdịkarịa ala ọnwa iri abụọ ma nwee aha mbụ. Ọ bụ ule Schutzhund kachasị sie ike n'akụkụ niile, belụsọ maka nsuso nke nwere ogo dị elu akpọrọ FH1 na FH2.
Achọpụtara ihe ndị a chọrọ maka ọkwa nke ọ bụla na ọkwa nke Schutzhund na weebụsaịtị FCI mana ị nwekwara ike ịlele weebụsaịtị DVG na USCA.
A kọwakwara ihe ndị a chọrọ n'ụzọ zuru ezu mgbe ị sonye na klọb Schutzhund ọ bụla na mpaghara gị .
Probably nwere ike iburu n'isi usoro Schutzhund atọ ugbu a - nsuso, nrube isi, na nchedo. Ya mere, ka anyị lebakwuo anya na usoro ndị a.
Usoro nsuso na-amalite site na nnwale ihu igwe iji gosipụta ezi uche nke nkịta, nke gụnyere nyocha dị nso na akwa mkpuchi iji hụ na nkịta ahụ abụghị onye ihere ma ọ bụ onye na-eme ihe ike.
A na-enyocha ule nyocha na egwu (elu ala dị ka ahịhịa ma ọ bụ unyi) tọrọ site na oyi akwa egwu. Egwu ahụ nwere ọtụtụ ntụgharị na-agụnye ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke obere, ihe mmadụ mere.
Ogologo, afọ, na mgbagwoju anya nke egwu ahụ ga-adị iche na-adabere na aha Schutzhund, yana ọnụ ọgụgụ nke ihe.
O kwesiri ka nkita na-esi isi maobu ihe ndia .
Mgbe nkịta hụrụ ebe ihe ahụ dị, ọ kwesịrị idina ala ya na paịts ya n’ihu ma ọ bụ gosi ebe ihe ahụ dị n’ụzọ ọzọ, nke e kpebiri na mbụ.
Nnwale nrube isi nke Schutzhund yiri nke Mmemme nrube isi nke American Kennel Club ebe ọ bụ na ha na-elekwasị anya dị iche iche ikiri ụkwụ na mmega ahụ .
E nyere nkịta ahụ iwu ka ọ kwụrụ, nọdụ ala, dinara ala ka onye na-elekọta ya na-agagharị. Mgbe ahụ, a na-echeta nkịta ahụ n'aka onye nchịkwa site na ọnọdụ ndị a dị iche iche.
Onye na-ere ihe nwekwara ike inye nkịta ahụ iwu ka ọ weghachite ihe mgbochi, mgbidi dara ada, ma ọ bụ n'elu ala dị larịị, na-eji ụda olu dị iche iche.
A na-enyekwa nkịta ahụ iwu ka ọ na-agba ọsọ site n'aka onye na-ejide ya na akara ogologo ma dinara ala mgbe ọ gachara.
N'ikpeazụ, nkịta kwesịrị ịnọdụ ala n'ọgwụgwụ n'ọhịa ahụ, pụọ n'aka onye nchịkwa ahụ, ebe nkịta ọzọ na-eme mmega ahụ.
Ikwusi ike ma na-agbanwe agbanwe bụ isi ihe na nkuzi nrube isi, yana mmesi obi ike. Nwere ike ịchọta ọtụtụ ndụmọdụ bara uru banyere usoro ọzụzụ nkịta n'ịntanetị, ọkachasị na na Leerburg nkịta ọzụzụ website .
Oge nchebe na-enyocha obi ike nke nkịta, ịdị gara gara, na ike anụ ahụ .
Otu n'ime ihe omume bụ isi gụnyere ịchọta onye zoro ezo nke na-eme dị ka aghụghọ mmadụ na ichebe ya ruo mgbe onye njikwa ahụ ga-abịa. Nkịta kwesịrị ịchụso aghụghọ ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwaa ịgbanahụ ma jidere ya nke ọma.
Otu ihe a na-emetụta ma ọ bụrụ na aghụghọ ahụ agbalịa ịwakpo onye na-elekọta nkịta.
Nnwale ikpeazụ na-eziga nkịta ahụ mgbe aghụghọ ahụ gasịrị mgbe ọ na-apụta site na ebe nzuzo ya na njedebe nke ubi ahụ ma jụ ịkwụsị mgbe onye njikwa ahụ nyere ya iwu.
Decogha ahụ ga-agbakwa nkịta ahụ n'oge ahụ, jiri osisi mee ya egwu. Ọrụ nkịta bụ, ọzọ, ijide aghụghọ ahụ.
Ihe nkịta ọ bụla nkịta ahụ kwesịrị iji kwụsie ike ma tinye ya na aka ya . Nkịta ahụ kwesịkwara ịkwụsị ijide iwu ma ọ bụ mgbe aghụghọ ahụ kwụsịrị ịgbaga ma ọ bụ ịlụ ọgụ.
Na mgbakwunye na obi ike ma jide ike, nkịta ahụ kwesịrị inwe obere àgwà 'ịgafe' ị ga - eme nke ọma na ọzụzụ ọzụzụ:
Njikpa onwe - Nọgidere na-enwe nrụgide ma na-achịkwa onwe ya na steeti obi ụtọ na nnukwu ụgbọala.
Diskpa oke - Inwe ike ikpebi onye bụ ihe iyi egwu na onye abụghị, yana inyocha ọkwa iyi egwu iji zaghachi ya.
Ihe doro anya - manọgide na-edozi isi n'okpuru nrụgide na ilekwasị anya na ọrụ na ntuziaka nke onye njikwa.
Nrube isi - List Lista ntị na ịgbaso iwu nke onye njikwa oge niile.
Kedu ihe onye ọka ikpe ga-enyocha na ikpe Schutzhund?
N'ime usoro ụzọ atọ nke Schutzhund, ndị ikpe na-atụ anya ka nkịta gosipụta obi ike, ọgụgụ isi, ịba uru, nkwụsi ike nke uche, arụmọrụ arụmọrụ, ntachi obi, ọzụzụ, ịdị njikere ịrụ ọrụ, yana ikike isi.
Nke ọ bụla n'ime ụzọ atọ ahụ bara uru 100. Iji gafee ikpe Schutzhund ma nweta aha, nkịta kwesịrị irite opekata mpe 70 na nkebi nke ọ bụla.
Nkịta ndị na-emezughị nke a ma ọ bụ na ha agaghị agafe ule ikpe tupu oge ikpe ga-emeghachi ule ahụ niile n'oge ikpe na-esote iji nweta aha Schutzhund.
Nkịta Schutzhund a zụrụ azụ nwere ike ịba ọgaranya n'ọtụtụ ọrụ. Ha nwere ike ịdị mma na ọzụzụ atụrụ, nchedo onwe onye, ​​nyocha na nnapụta, na-ejikarị ya dị ka nkịta ọrụ.
Agbanyeghị, nkịta ndị a bụ ndị ga-eme nke ọma maka ndị uwe ojii ma ọ bụ ọrụ agha. Ha nwere ntọala di uku ma choro obere nkuzi ozo ka ha di njikere maka oru ndi uwe ojii.
N'ezie, Iwu German a na-ejikarị ya maka ọrụ ndị uwe ojii na USA ebe ọ bụ na a zụrụ ọtụtụ nkịta ndị uwe ojii na Schutzhund na mbụ.
Ọzọkwa, ụfọdụ nkịta si na Germany - ọkachasị ndị ọzụzụ atụrụ German. Ndị a bụ iwu ole na ole dị na German:
Oche (Nọdụ ala)
Hier (Dị ka)
Nye olu dara ụda (kwuo okwu)
Na mgbakwunye na ọtụtụ ike ọrụ, nkịta a zụrụ azụ Schutzhund dịkwa nkịta a zụrụ nke ọma n'ụlọ .
Nkịta ndị a dị jụụ ma na-echekwa ma na-achọsi ike ichebe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ha nwere obi ike kamakwa dị mma na ụmụaka .
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Schutzhund, mmalite kachasị mma ga-abụ ịchọta klọb Schutzhund dị gị nso ma sonyere otu n'ime ha.
Nke a nwekwara ike ịbụ nnukwu ụzọ iji belata ọnụahịa ọzụzụ Schutzhund n'ihi na klọb na-anakarị ego ndị otu afọ ma na-enye ọzụzụ n'efu.
Ọnụ ego nke otu ndị otu nwere ike ịdị iche na otu klọb gaa na nke ọzọ. Ọ na-adịkarị n'etiti $ 500 na $ 1,000 kwa afọ, ebe ìgwè ọzụzụ sessions na klọb na-enwe 2-3 ugboro kwa izu .
N'ezie, ịnwere ike ịhọrọ ịkwụ ụgwọ maka ọzụzụ ọzụzụ Schutzhund kama ịkwụ ụgwọ kwa afọ. Oge nke otu sitere na $ 15 gaa $ 40 kwa oge, ebe nnọkọ nkeonwe nwere ike iri ihe ọ bụla site na $ 70 ruo $ 350.
Na mkpokọta, ọnụego nke ọzụzụ Schutzhund nke ga-eme ka nkịta gị dị njikere maka asọmpi gbara $ 4,000 na nkezi.
Ọ bụ ezie na nkịta niile nwere ike isonye na ọnwụnwa Schutzhund, ụdị nchedo dị mma na ya. Họrọ nwa nkita maka Schutzhund adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị na egwuregwu ahụ dị ka ọrụ ntụrụndụ.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ka nkịta gị nwee asọmpi, tụlee ụdị ụdị ndị kwesịrị ekwesị dị ka Onye Ọzụzụ Atụrụ German, Belgian Malinois, Rottweiler, ma ọ bụ Doberman. Akara ọbara nke nwa nkita dịkwa mkpa ka e buru n'uche.
Nwere ike ịmalite ọzụzụ nrube isi maka Schutzhund mgbe nwa nkita di naanị 7 ma ọ bụ 8 izu . Lelee otu isi nkuzi Schutzhund nrube isi maka ụmụ nkita na-ele vidio a:
Choo klọb Schutzhund nke dabara na ndu gi - Ọ kachasị mma ịlele klọb dị na mpaghara ma chọtakwuo banyere ha tupu ị nweta nkịta gị. Ezigbo ụlọ ọrụ Schutzhund ga-enyere gị aka ịmụ Schutzhund ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbido.
Họrọ ezigbo onye ndụmọdụ - Dịka onye mbido Schutzhund, ọ dị mkpa ịhọrọ onye ndụmọdụ dabara na ụdị gị ma kesaa otu ụkpụrụ ahụ.
Mara nkịta gị - Knowingmara nkịta gị ga - enyere gị aka ịghọta otu esi ejikwa ya nke ọma na otu ị ga - esi mee ka ọrụ a bụrụ ihe na - atọ gị abụọ ụtọ. Ikwesiri iburu n'uche ihe ndi nwere ike ime ma mara ihe n'eme ya kachasi nma ka i wee jiri ha mee ka ha nwekwuo ike.
Jiri ngwa Schutzhund kwesịrị ekwesị - Ngwá ọrụ ọzụzụ, ngwaọrụ, na ngwaọrụ gụnyere nkịta nkịta nkịta, mkpasu iwe, nkịta dumbbells, leashes (obere na ogologo), nsuso isiokwu, bait akpa, nkịta blinds, mgbochi, wdg.
Gụọ banyere ọzụzụ Schutzhund - aboutgụ banyere Schutzhund nwere ike inyere gị aka ịkwadebe. Akwụkwọ dị ka Usoro Schutzhund & Trainingzọ Ọzụzụ nke Susan Barwig na Stewart Hilliard dere, Oke nkịta na-arụ ọrụ, Akwụkwọ ntuziaka Schutzhund nke Dr. Dietmar Schellenberg dere, na Nchedo nkịta site Helmut Raiser kwesịrị ịbụ nhọrọ mbụ gị.
Fọdụ ndị nwere nkwenkwe ụgha banyere ọdịdị Schutzhund na otu ọ nwere ike isi metụta mmụọ nkịta:
Schutzhund na-eme ka nkịta dị egwu ma na-eme ihe ike.
Ọrụ nchebe na-eme ka nkịta na-eme ihe ike.
Nkịta na-aka ata arụ ma a zụọ ya ịta ụta.
Ọrụ nchedo na-eme ka nkịta bụrụ 'nkịta ọgụ.'
Schutzhund na-eme ka nkịta na-etinye onwe ha.
Ndị a bụ echiche efu ole na ole banyere Schutzhund nke na-enweghị ihe ndabere na eziokwu. Nkịta ndị a zụrụ na Schutzhund adịghị eme ihe ike, dị ize ndụ, ma ọ bụ yikarịrị ka ọ ga-ata aru ma ọ bụ tinye onwe ya .
N'ezie, a zụrụ nkịta ndị a nke ọma na ha nwere ike ghara ịdị na-eme ihe ike ma ọ bụ na-awakpo n'enweghị ihe kpatara ha karịa nkịta a na-azụghị azụ ma ọ bụ nke a zụrụ nke ọma.
Fọdụ na-echekwa na ọzụzụ Schutzhund dị obi ọjọọ ma ọ bụ na nkịta anaghị enwe obi ụtọ. Ọzọkwa, nke a abụghị eziokwu ebe ọ bụ na nkịta na-anụ ụtọ ọrụ niile Schutzhund gụnyere.
Tụkwasị na nke a, usoro ọzụzụ na-elekwasị anya na nkwalite dị mma ma ọ bụghị n'ụzọ ọjọọ na nkịta.
Nkịta Schutzhund nwere ike ịbụ oke nkịta ezinụlọ . A na-adọ nkịta ndị a ọzụzụ, na-arụ ọrụ nke ọma na nrụgide, na-ejikwa ụdị mkpọtụ ọ bụla, yabụ ha dị mma na ụmụaka.
Egwuregwu ahụ nwekwara ike ime ka njikọ dị n'etiti gị na nkịta gị sie ike.
Dịka anyị kwuru na mbụ, Schutzhund bụ ihe ọchị ma nwee ọtụtụ elele. Nkịta gị ga-abụ onye na-adọkwu aka na ntị, mee ka ọrụ ya na-atọ ụtọ, ma melite ọdịdị ahụ na uche ya.
Agbanyeghị, Schutzhund chọkwara ọtụtụ nraranye, ndidi, na mbọ, yabụ gbaa mbọ hụ na ị dịla njikere.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ ma ọ bụ chọọ ịkọ ahụmahụ gị na Schutzhund, hapụ ozi na ngalaba nkọwa.
Corgi Husky Mix: Ihe niile I Kwesịrị Knowmara
Ime ihe ike ọ bụ ọrụ dị mma maka nkịta gị?
ego ole nkịta m kwesịrị ịgbakọ ihe mgbako
Ndị ọzụzụ atụrụ German na -acha ọbara ọbara & oji
aki oyibo mmanụ nkịta ncha ntutu uzommeputa
ego ole ka ndị mkpụmkpụ ego dị
ọkara husky ọkara ọlaedo retriever